Juventus oo u Dhaw Hanashada Horyaalka
Kooxda Juventus ayaa aad ugu dhawaatay hanashada horyaalka Talyaaniga kadib marki ay xalay 3-1 ku garaacday naadiga Bologna ciyaar ka dhacday magaalada Turin.
Juve ayaa ka badbaaday guuldarro kula dhici laheyd Alianz Stadium kadib marki ay Bologna gool kala hormartay, hase yeeshee saddex gool oo ay qeybti danbe keeneen ayay ku dhaafeen Bologna. Goolasha laba ka mid ah waxaa kala qeybsaday Sami Khadira iyo Paulo Dybala.
Juve ayaa ku guuleysan karta horyaalka Seria A-da haddii ay Napoli ku jabto ciyaarta ay caawa la dheeli doonto Torino. Ciyaaraha kalana Milan ayaa shalay 4-1 ku dardartay kooxda Verona. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Hakan Calhanoglu, Patrick Cutrone, Ignazio Abate iyo Fabio Burini.
Guuldarrada soo gaartay Verona ayaa bidday in ay u laabato horyaalka Seria B-da ee Talyaaniga. Kooxda Inter Milan ayaa iyaduna maanta duhurki ciyaar ay la dheeshay Undinesi ay guushu 4-0 ku raacday Inter.